Nhau - Musiyano mukuru uripo pakati pemarata uye simbi isina chinhu
Musiyano mukuru pakati kwakakurudzira jira uye Stainless simbi jira
Kwakakurudzira simbi yairema ndiko kudzivisa gobvu simbi yairema pamusoro kuva ngura, uye kuwedzera ayo anobatsira upenyu. Iyo gobvu simbi yeplate pamusoro ichave yakaputirwa neyakaganhurirwa nesimbi yezvinhu zinc, uye iyi mhando yeZinc yakavharwa inotonhora yakakungurutswa simbi ndiro inonzi kwakakurudzira ndiro.
Kwakakurudzira inopisa anokungurutsirwa ubvise simbi zvigadzirwa zvinogona kushandisa mumaindasitiri mazhinji akasiyana:
1. Maindasitiri ekugadzira akadai seinjiniya yekuvaka, maindasitiri akareruka, mota, kurima, kuchengeta zvipfuyo, hove uye maindasitiri ebasa.
2. Indasitiri yekuvaka iyo inoda kuburitsa ngura-isingagadzirise zvigadzirwa kana maindasitiri kuvaka chivara simbi padenga uye denga Grid.
3. Batsira indasitiri yesimbi kugadzira zvigadzirwa zvemumba, chimney chevagari, zvekushandisa mukicheni, nezvimwe.
4. Indasitiri yemotokari inoda kuburitsa zvimwe zvinogadziriswa nemota ngura, nezvimwe.
Mabasa akakosha ezvekurima, kuchengeta zvipfuyo uye kuredza ndeyekuchengetedza, kutakura, uye kuita chando kwenyama nechikafu chegungwa, nezvimwewo. Zvekutengesa mabasa akakosha pakuchengeta nekutakura zvinhu, kurongedza zvekushandisa, nezvimwe.
Stainless simbi ndiro inoratidza kuramba kwayo gasi, chiutsi, mvura uye nezvimwe zvisina simba zvinokanganisa zvinhu uye acid, alkali, munyu uye nezvimwe zvehupenyu makemikari zvinokanganisa zvinhu ngura yesimbi, rimwe zita reasina simbi isimbi inomira simbi. Mukuita, iyo simbi inopikisa simbi inowanzodaidzwa kunzi ndiro yesimbi isina simbi, uye iyo simbi inopikisa simbi inonzi acid inodzivirira simbi.
Stainless simbi ndiro inowanzo kuve yakakamurwa kuita akati wandei zvikamu, zvinosanganisira austenitic simbi, ferritic simbi, ferritic simbi, ferritic - metallographic chimiro (kaviri chikamu) simbi isina simbi ndiro uye kunyura hardbottom isina simbi ndiro. Uye zvakare, maererano nechimiro, inogona kukamurwa kuita chromium simbi isina simbi, chromium nickel simbi isina simbi uye chromium manganese nitrogen simbi isina simbi.